Demon Slayer ရာသီ ၂ ရက်စွဲအသစ်တင်သောနေ့များနှင့်အခြားအရာများ - တီဗီ
Demon Slayer season2release date: အသစ်သောရာသီရှိပါသလား။ ဘယ်တော့ထွက်လာမှာလဲ
Demon Slayer Season2Release Date Updates
ISHINOMAKI, JAPAN - မတ်လ ၁၁ - ဂျပန်နိုင်ငံ Ishinomaki တွင် ၂၀၁၁ ခုနှစ် Tohoku ငလျင်နှင့်ဆူနာမီ ၁၀ နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်မီးအိမ်အခမ်းအနားတွင်ဖန်းဂတ်စ်သရုပ်ဆောင်ထားသောမီးအိမ်တစ်ခုတွင်ဖယောင်းတိုင်တစ်လုံးဖယောင်းတိုင်မီးလောင်နေသည်။ ဂျပန်သည် ၂၀၁၁ ခုနှစ်တိုဟိုကိုငလျင်၊ ဆူနာမီနှင့်သုံးဆနျူကလီးယားအရည်ပျော်မှုဖြစ်ပွားမှု ၁၀ ​​နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားကိုကျင်းပမည် ပြင်းအား ၉.၀ ရှိသောမြေငလျင်သည်မှတ်တမ်းတင်ဖူးသမျှတွင်အင်အားအရှိဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၄၀.၅ မီတာအထိမြင့်သောဆူနာမီလှိုင်းများကြောင့် ၇၀၀ ကီလိုမီတာနှုန်းဖြင့်သွားပြီးကုန်းတွင်း ၁၀ ကီလိုမီတာအထိမြင့်တက်ကာမြို့တစ်ခုလုံးကိုဖျက်ဆီးသည်။ အရှေ့ဘက် ၂.၄ မီတာအကွာရှိ Japans ၏အဓိကကျွန်းကိုရွှေ့ပြောင်းခဲ့ပြီးကမ္ဘာမြေအား၎င်း၏ ၀ င်ရိုးပေါ်တွင် ၁၀ စင်တီမီတာမှ ၂၅ စင်တီမီတာအကြားရွှေ့ပြောင်းခဲ့ပြီးဂြိုလ်များ၏လည်ပတ်နှုန်းကိုတစ်နေ့လျှင် ၁.၈ မိုက်ခရိုစက္ကန့်တိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ (Carl Court / Getty Images မှဓာတ်ပုံ)
အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသည့်သူငယ်ချင်းများကိုဘာကြောင့် R သတ်မှတ်သလဲ။ မင်္ဂလာဆောင်နည်းပြ Netflix သို့Aprilပြီလ ၇ ရက်၊
Demon Slayer ၏ရာသီမည်မျှရှိသနည်း။
လောလောဆယ်ပြပွဲအတော်လေးအသစ်ဖြစ်သကဲ့သို့လက်ရှိစီးရီး၏တစ်ရာသီသာရှိပါသည်။ ပထမဆုံးရာသီမှာ ၂၆ ခုလောက်ရှိပြီးသင်အားလုံး Netflix မှာကြည့်လို့ရပါတယ်။
ကြယ်တစ်လုံးကိုမည်သို့ကြည့်ရမည်ကို 2018 တွင်မွေးဖွားခဲ့သည်
Demon Slayer တစ်ရာသီ2ရှိတော့မှာလား။
ဟုတ်ကဲ့! ဒါဟာ၏ဒုတိယရာသီထွက်လှည့် Demon Slayer ဖြစ်ခဲ့တာ တရားဝင်ကြေငြာခဲ့သည် နှင့်လာမည့်ရာသီအတွက်အစော်ကားပင်ရှိခဲ့သည်။ အောက်တွင်ကြည့်ပါ။
စီးရီး၏ဆက်ဆက်ဒီနှစ်ပြန်လာလိမ့်မည်ဟုသိ။ anime ၏ပရိသတ်များလွယ်ကူသောအနားယူနိုင်ပါတယ်, ဒါကြောင့်အစဉ်အဆက်ထက်သာ။ ကောင်း၏!
ပြပွဲ၏ဒုတိယရာသီသည်၎င်း၏ရုပ်ရှင်အဘယ်အရပ်ကနေဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်, Demon Slayer the Movie: Infinity Train၊ ချွတ် left နှင့်ဖုံးလွှမ်းလိမ့်မယ် ဖျော်ဖြေရေးခရိုင် Arc ။ ဒီ arc တွင်ပါ ၀ င်မည့်အကျဉ်းချုပ်အကျဉ်းချုပ်ကိုဒီမှာဖတ်ပါ။
Tanjiro, Inosuke နှင့် Zenitsu တို့သည် Toshen ရှိ Sound Hashira နှင့်အတူလိုက်ပါပြီးခရိုင်အတွင်းရှိနတ်ဆိုးများ၏ကောလာဟလများကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးနေသောပျောက်ဆုံးနေသောဇနီးများကိုရှာဖွေရန် Yoshiwara သို့သွားရောက်ခဲ့သည်။
အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောဇာတ်လမ်းတွဲအပြင် ပို၍ ပင်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောကာတွန်းသည်အစဉ်အမြဲမျှော်လင့်ထားသည့်ဒုတိယရာသီတစ်ခုနှင့်ညီသည်။
Demon Slayer ရာသီ2တွင်ဖြစ်စဉ်မည်မျှရှိသနည်း။
စစ်မှန်တဲ့ anime ဖက်ရှင်ပြပွဲမှာပြသတဲ့ရှေ့ပြေးရာသီမှာဖြစ်ရပ်များဟာနောက်လာမယ့်ရာသီတွေနဲ့ကိုက်ညီသင့်တယ်။ ဆိုလိုတာကလာမယ့်ရာသီအတွက်ဖြစ်စဉ် ၂၆ ခု ၆ ခုရှိမယ်လို့ဆိုလိုတယ်။
သို့သော်ဤအချက်ကိုအတည်မပြုရသေးသောကြောင့်ဖြစ်စဉ်များသည်အမြဲတမ်းပိုမိုမြင့်မားပြီးနိမ့်ကျနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သတင်းအချက်အလက်ပိုမိုရရှိသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်သင့်အားသင်အမြဲတမ်း update ပေးပါမည်
Star Trek ရှာဖွေတွေ့ရှိမှု Netflix စောင့်ကြည့်
Demon Slayer ရာသီ2သည်ထုတ်လုပ်မှုတွင်ရှိပါသလား။
ယခုပြပွဲသည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွက်ခန့်မှန်းမည့်ရုံမတိုင်မီအချိန်ကကုန်ဆုံးသွားသောကြောင့်ထုတ်လုပ်မှုလွန်ကာလတွင်ဖြစ်နိုင်သည်။
Demon Slayer ရာသီ2လွှတ်ပေးရန်ရက်
ကြိုတင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းဒုတိယရာသီ Demon Slayer ဒီနှစ်တစ်ချိန်ချိန်မှာဖြန့်ချိလိမ့်မည်, ဒါပေမယ့်သင်ဖြစ်ကောင်းအတိအကျဘယ်မှာအံ့ you’re ဖွယ်ရှိပါတယ်။
anime က်ဘ်ဆိုက်အရသိရသည် သရဲ , ဒုတိယရာသီ 2021 ခုနှစ်တွင်တစ်ချိန်ချိန်မှာ premiere လိမ့်မယ်။ ဝေးလသည်အထိ, ထိုမသိသေးပါ။ သို့သော်စီးရီး၏ကန ဦး ရာသီနှင့်newပြီလတွင်ထုတ်လွှင့်မည့်နှစ်သစ်ကူးရုပ်ရှင်နှင့်အတူလာမည့်ရာသီသည်သင်ထင်သည်ထက်စော။ ရောက်လာနိုင်သည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ဘာမှမပြောင်းလဲဘူးဆိုရင်နောက်ဆုံးပေါ်နောက်ဆုံးသတင်းအားလုံးကိုသင့်အားပထမဆုံးသင်ကြားပေးလိမ့်မည် Demon Slayer ရာသီ2။
အဲဒီအချိန်ကစပြီး Netflix ပေါ်ရှိ anime ၏ရာသီဥတုအခြေအနေ ၁ ကိုမူးယစ်ဆေးဝါးကင်းစင်စွာကြည့်ရှုခံစားနိုင်ပါပြီ။ အဖြစ်ကောင်းစွာ၎င်း၏စံချိန်ချိုးရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ပါ Demon သည်ရုပ်ရှင်: Infinity ရထားသတ် ၂၀၂၁၊ 23ပြီ ၂၃ ရက်တွင်ယူအက်စ်ပြဇာတ်ရုံများတွင်ပြသမည်။
castlevania ရာသီ2Netflix မှလာမယ့်အခါ
နောက်တစ်ခု:Yasuke ထုတ်ဝေသည့်နေ့စွဲ၊ သွန်းခြင်း၊ အနှစ်ချုပ်၊ နောက်တွဲယာဉ်နှင့်အခြားအရာများ
အဆိုပါ flash ကိုများအတွက်ရာသီသစ်
ရဲ့မီးခိုးရောင်ခန္ဓာဗေဒ Netflix ၏ရာသီသစ်
Hulu အပေါ်ရာသီ4သည်အတရားဟောဆရာမည်သည့်အခါ
pll ရာသီ7netflix လွှတ်ပေးရန်နေ့စွဲ
ကြောက်စိတ်ရာသီ2Hulu အပေါ်သေလွန်လမ်းလျှောက်